भावना प्रसाईं व्यस्त दैनिकीले नैतिक दिनहुँजसो थकित हुन्छ । परिवारलाई राम्रोसँग समय दिन सकेको छैन उसले । अब त उसलाई, घर परिवारभन्दा पनि काम नै प्रिय लाग्न थालिसकेको छ । बेलुका घर जाँदा बच्चाहरु सुतिसक्छन अनि आफू बिहान घरबाट निस्किँदा उठेकै हुँदैनन् । कसैको पिता भएर पनि पिता हुनुको महसुससम्म थिएन उसलाई । श्रीमतीको सामीप्यताको आवश्यकताले उसले एकरात निदाएकी श्रीमतीलाई...
म्युजिक खबर अवार्डमा घिसिङको सिर्जनामा दुई सम्मान
मनहरीराजधानीमा सम्पन्न भएको छैटौँ म्युजिक खबर अवार्ड २०७४ मा मनहरीका सर्जक बुद्धिमान घिसिङले डायस्पोरा सम्मान प्राप्त गरेका छन् । साउन २२ गते भएको अवार्ड बितरण समारोहमा घिसिङले यो सम्मान गृहमन्त्री जनार्दन शर्माको हातबाट ग्रहण गरेका हुन् । लामो समयदेखि प्रवासमा रही गीत संगीतमा योगदान गरेबापत उनलाई म्युजिक खबर अवार्ड प्रदान गरिएको हो । उनी साउदीमा रही निश्चित अबधिका...
मस्तिष्क चाहे शून्य होस्, चाहे विचारहरुको भलले अटेसमटेस होस्, तिनलाई पोख्नूअघि मेरा अघिल्तिर एउटा खाली पन्ना हुने गर्छ। अनि हुने गर्छ एउटा गहिरो सन्नाटा। जहाँ मुटुसँगै विचारहरु धड्किएको एकतमास आवाज म आफैंभित्र गुञ्जिरहेको हुन्छ। त्यही गहिरो सन्नाटाको बीचमै म भरिएको मस्तिष्कलाई खाली गराउने प्रयास गर्छु। म खाली पन्नाहरुलाई भर्ने प्रयास गर्छु। कहिलेकाहीँ शब्दहरु केवल...
रन्जना दाहाल हेर्छु जता आजकल कोलाहल मात्र देक्छु देखाउन रोए पनि भित्रभित्रै हास्ने मात्र भेट्छु। आश्वासन दिनेहरु कति भेटे कति सहयोग को नाम सुन्दै भाग्नेहरु मात्र देक्छु। सफा लुगा लगायर नाङ्गियेका धेरै देखे आदर्शका कुरा गर्ने गतिछाडा मात्र भेट्छु। सुन्दरताको बयान गरि हिड्नेहरु धेरै भेटे फुल टिप्ने बहानामा हागा भाच्ने मात्र देक्छु। हेर्छु जता आजकल कोलाहल मात्र...
सुचना!! मैले शिरफुल सजाउन चाहेको त्यो सुनकेशरी कपाल गुलाब संग मागेको रातो रंगले भर्न चाहेको त्यो सिउदो । नसालु तिरहरु प्रहार गरिरहने ती गाजलु आँखाहरु गहिरो चुम्बनका लागि साँचेको त्यो गुलाबी अधर । मेरो नजरलाई बसमा रखिरहन सक्ने त्यो बक्षस्थल र, सुकोमल कमर। सबै सबै चोरेर छिन् छिन् पाउजु बजाउदै शहरबाट फरार भएकाछ्न् दुई पाइतालाहरु कृपया देख्नुहुने महानुभावहरुले निम्न...
अभिनव प्रत्यूष त्यही हुनेछ, प्रकृतिको रित जस्तो छ हेर त खोली बिचमा, पिडित जस्तो छ । अवसोस नगर अब, जे-जे हुनु भैसक्यो साहास गरि अघि बड्नुमै,हित जस्तो छ । मात्र फैलिरहेछन् केही मृत्युका खबरहरु तर लाग्छ सिङ्गो खिम्तीनै प्रभावित जस्तो छ । म उद्दार पर्खिरहेछु तsssल-तsssल पहिरोमा सुनिन्छ सहानुभूति धुन,राष्ट्रिय गित जस्तो छ । हे प्रकृति! गर्दैछु तिमीलाई आज अन्तिम प्रश्न लाग्छ...
निर्देशक- जनक खड्का 'विरक्त' झस्किएर फिक्का कलम समाऊदाको गजल । कल्पनामा देखी ऊन्लाई रमाऊदाको गजल ।। ओईलिएको पात त्यो रूखबाट झर्ने बेला । बिना काम फिक्का खाम थमाऊदाको गजल।। स्वर्णिम संसारभित्र यौटा स्वप्न महल बनेपछि । मुटुमा प्यार प्रियसीको कमाऊदाको गजल।। अनन्त त्यो नभ चुम्ने असिम स्वप्न सजाएर। वादलभित्र ऊडि डेरा जमाऊदाको गजल...
तिमी लड्यौ युद्ध, साहास बोकेर । हेर त आयो जितपनि, इतिहास बोकेर । - पिर नगरे है बा,मलाई सम्झि हरघडी छोरो फर्किनेछ गाँस र कपास बोकेर। - जन्मिदा त कुशलै जन्मिएथ्यो बालक ए! उ त गएछ एकमुठ्ठी सास बोकेर । - के थाहा बिचरिलाई उ दलाली हो भनी सुम्पिइन् श्रीमानलाई शरीर बिश्वास बोकेर । - रित्तिए त्यसै बेला बाबुका आँखामा आँसुहरु झर्यो क्षितिजबाट जहाज,एउटा लास बोकेर ।...
एउटा यात्रामा भेटिएकी थियौ तिमी
कथा महाबिर बिश्वकर्मा (सञ्चारकर्मी) एउटा यात्रामा भेटिएकी थियौ तिमी । एउटा असरल्ल यात्रामा । त्यस्तै २५/२६ को थिएँ हुँला त्यतिबेला । मलाई पहिलेदेखी नै घुमी हिँड्नुपर्ने । कहाँ पुगुँ भन्ने गन्तब्य नहुने, कसलाई भेटुँ भन्ने उद्देश्य नहुने । फगत हिँडिरहनु नै जीन्दगी हो भन्ने लाग्ने । यो सँसार पनि त एउटा यात्रा हो, जहाँ घुम्नका लागि, केही समय बिताउँ भन्नको लागि हामी अन्तै कतैबाट...